नेपाल आज | युद्ध भए ५० लाख नेपाली प्रभावित हुन्छन् : डा. केसी (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । कुनै पनि देशको सैन्य प्रमुखलाई अर्को देशको भ्रमणमा गएको बेला राजनीतिक हत्या भयो । इरानको विशेष सैन्य दस्ता कुड्स फोर्सका प्रमुख मेजर जनरल काशिम सुलेमानी इराक भ्रमणका गएका बेला उनको अमेरीकाले हत्या गर्यो ।
त्यसयता हरदिन इरान अमेरीका युद्ध सुरु हुनै लागेको भन्दै अनेकन टिकाटिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन् । मेजर जनरल काशिम सुलेमानी मारिएपछि अमेरिकी हमलाको बदलास्वरूप इराकमा अमेरिकी सैन्यहरू रहेका हवाई अखडाहरूमा ब्यालेष्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्यो ।
यो सन् १९७९ मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कब्जामा लिइएयता इरानले अमेरिकाविरुद्ध गरेको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रकृतिको हमला हो। इरानबाट प्रहार गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी क्षेप्यास्त्रहरूले इराकी राजधानी बग्दादको पश्चिमस्थित एरबिल र अल असदमा रहेका दुई हवाई अखडालाई निशाना बनाएका थिए। अर्कोतर्फ अमेरीकी राष्ट्रपतिको टाउकाको मुल्य तोकेको छ ।
जवाफमा अमेरीकी राष्ट्रपतिले इरानका सांस्कृतिक सम्पदासमेत ध्वस्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । त्यसयता युद्धको ठूलो त्रास विश्वसमुदायमा छाएको छ । के इरान अमेरीका युद्ध हुन लागेकै हो ? अर्कोतर्फ शक्तिशाली राष्ट्रले अर्को देशको सैन्य प्रमुखलाई मार्नु कत्तिको जायज हो ?
अनि युद्ध भएमा के होला मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इतिहासका प्राध्यापक रहिसकेका राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीसँग गरिएको कुराकानीको अंश :